बाइबल: इतिहासकै सबैभन्दा नरसंहारकारी किताब, २१ तथ्यसहित - Jagaran Post
Home/विशेष/बाइबल: इतिहासकै सबैभन्दा नरसंहारकारी किताब, २१ तथ्यसहित
आऊनुहोस आज थोरै बाईबलका पनि कुरा गरौं कति स्वस्थानीकोमात्र कुरा गर्नु? कति स्वस्थानीका मात्र पाना च्यात्ने कुरा गर्नु? कति हिन्दुधर्म मात्र झुर, रुढ, अन्धविश्वासी, दासी, हेपाहा, विभेदकारी र तल्लोस्तरको छ भनेर गाली गरिरहनु? कति हिन्दुलाई हिन्दुधर्मबाट नै खतरा छ भनिरहनु? कति हामी रुढि र `गुहुका किरा´ मात्र भैरहनु? हाम्रा धर्मग्रन्थहरुले त महिलालाई दासी बनाए, ढोंगी बनाए, महिलाको अपमान गरे, पुरुषवेगर महिलाको संसार नभएको, पुरुषलाई खुसी पारेर, अपशव्द नबोलेर, पुरुषका हरेक चाहनाहरु खुसीसाथ पूरा गरेर बाँचेमात्र महिला भएको अनुभूति हुन्छ भनेर सिकाएछन। लौ भैगो। अब संसारभर आफ्नो साम्राज्य फैलाऊँदै गएको कृश्चियन धर्म र यसका अनुयायीहरुले अवलम्वन गर्दै आएका बाईबलमा के छन त त्यस्ता महिला मुक्तिका कुरा? गैर अन्धविश्वास, गैर रुढ, गैर झुर, गैर दासी, गैरहेपाहा, गैर विभेदकारी? सायद बाइबलमा त त्यस्ता कुरा नहोलान जुन हिन्दु धर्मका ग्रन्थले हामीलाई नै ईरिटेड बनाऊँदै आएको छ। नोम चोस्कीले त्यसै भनेका होईनन: बाईबल ईतिहासको सबैभन्दा नरसंहारकारी किताब हो भनेर। तैपनि आऊनुहोस छोंटकरीमा हामीले बाईबललाई पनि नियालौं।
१) बाइबलको उत्पत्ति १९-२० मा भनिएको छ- रितबमोजिम हामीकहाँ आऊने पृथ्वीमा कुनै मानिस छैन। ३२ यसैले अब हामीले आफ्नो बुवालाई मद्य (मदिरा) खुवाएर उहाँसंग सुतौं र आफ्ना पिताबाट सन्तान खडा गरौं। ३३ त्यसैरात तिनिहरुले आफ्ना पितालाई दाखमद्य खुवाए र जेठीचाहिं आफ्नो पिताकहाँ गएर सुती। त्यो सुत्न आएकी जेठीको बारेमा उठेर गएकी लोतलाई केही अत्तोपत्तो भएन। ३४ भोलीपल्ट जेठीले कान्छिलाई भनी-” हेर हिजो राती म बुवासंग सुतें, आज राती पनि उहाँलाई मद्य खुवाऔं र तँ गएर बुवासंग सुत र हामी हाम्रो पिताबाट सन्तान खडा गरौं।”
२) लवेटिकस २१:९ मा भनिएको छ- यदि कुनै पुजारी या पुरोहित कि छोरीले यौन व्यवसायी गरि भने उसलाई सर्वाङ्ग नाङ्गो पारेर खुट्टामा बाँधी सार्वजनिक स्थलमा आगो लगाईदिनुपर्दछ।
३) लवेटिकस २१:१७-१८ मा भनिएको छ- जसको नाक थेप्चो छ या जो ब्याक्ति लुलो या अन्धो छ, उक्त ब्याक्तिलाई ईश्वरको प्रार्थनास्थलमा प्रवेशमा सख्त निषेध छ। नाक थेप्चो हुने, लुलो या अन्धो हुने ब्याक्ति ईश्वरको कृपा हुनै सक्तैन।
४) लवेटिकस २०:१० मा भनिएको छ- कुनै पनि पुरुषले आफ्नी पत्नी या पत्नीले आफ्नो पुरुषलाई धोखा दिन्छन भने तिनिहरुलाई बाँच्ने कुनै अधिकार छैन, त्यस्ता ब्याक्तिहरु मार्न योग्य हुन्छन।
५) लवेटिकस २०:१८ मा भनिएको छ – यदि कुनै पुरुषले रजस्वला भएकी स्त्रीसंग यौन सम्बन्ध राख्छ भने ती दुबैलाई समाजबाट बहिष्कृत गर्नुपर्दछ।
६) लवेटिकस २०:२७ मा भनिएको छ- यदि कोहि मनोरोगी (अतिंद्रीय) छ, जादुगर, चुडेलजस्ता तन्त्रमन्त्र जानेको छ भने त्यस्तालाई ढुंगाले हानी हानी मार्नुपर्दछ।
७) लवेटिकस २०:१५-१६ मा भनिएको छ- यदि कुनै पुरुष या स्त्रीले जनावरसंग यौन सम्बन्ध राखेको खण्डमा त्यस्तो पुरुष, स्त्री या जनावर सबैलाई मारेर फालिदिनुपर्दछ।
८) लवेटिकस १९:२७ मा भनिएको छ- शिरको बाल काट्नु हुँदैन, न नै दाह्री बनाऊन हुन्छ।
९) लवेटिकस १९:१९ मा भनिएको छ- यौटा खेतमा एकभन्दा बढि अन्न उब्जाऊनु हुँदैन।
१०) लवेटिकस १९: १९ मैं भनिएको छ- एकभन्दा बढि सुत ले बनेको कपडा लगाऊनु हुँदैन।
११) लवेटिकस २०:०९ मा भनिएको छ- जो ब्याक्ति आफ्नो मातापितालाई गाली गर्छन या उनीहरुको विरुद्धमा छन, त्यस्ता ब्याक्तिको सिधै हत्या गर्नुपर्दछ।
१२) लवेटिकस २०:१३ मा भनिएको छ- यदि कुनै एक ब्याक्तिले अर्को ब्याक्तिसंग झुठ बोल्छ र अर्कोले झुठ सुन्दछ भने दुवै ब्याक्तिलाई मारिदिनुपर्दछ।
१३) लवेटिकस २१:१४-१६ मा भनिएको छ- जसले ईश्वरलाई गाली गर्दछ, अपमान गर्दछ त्यस्तालाई सामुहिक रुपमा ढुंगाले हानी हानी हत्या गर्नुपर्दछ।
१४) डूटरानमी १३:५ मा भनिएको छ- यदि कसैले ईश्वरका विरुद्ध सपना देख्छ या ईश्वरको विरुद्धको भविष्यवाणी गर्दछ या जसले तपाईंलाई ईश्वरबाट बिमूख गर्ने कोसिस गर्दछ, त्यस्ता ब्याक्तिको हत्या गर्नुपर्दछ।
१५) डूटरानमी १३:६-१० मा भनिएको छ- यदि कसैले तिमिलाई अरु नै ईश्वरको पुजा गर्ने सल्लाह दिन्छ या धर्म परिवर्तन गर्ने सल्लाह दिन्छ भने त्यस्ता ब्याक्तिलाई सिधै मारिदिनुपर्दछ, चाहे त्यो तपाईंको परिवारको सदस्य नै किन नहोस।
१६) डूटरानमी १३:१२-६ मा भनिएको छ- यदि अन्य कुनै धर्म या अरु नै ईश्वरको पुजा गर्ने शहर यदि तपाईंले भेट्नुहुन्छ भने त्यस्तो शहरलाई तहसनहस पारिदिनुपर्दछ। त्यहाँ बस्ने सबैको हत्या गर्नुपर्दछ। यहाँसम्म कि जनावरलाई समेत जिऊंदो छोड्नु हुँदैन।
१६) डूटरानमी १७:२-७ मा भनिएको छ- अन्य धर्म मान्ने धर्मावलम्बीको तुरुन्त कत्लेआम हुनुपर्दछ।
१६) डूटरानमी २२:५ मा भनिएको छ- महिलालाई पुरुषको र पुरुषलाई महिलाको कपडा पहिरिन सख्त मनाही छ।
१७) इफिज्यंस ६:५ मा भनिएको छ- गुलाम (नोकर)ले आफ्नो मालिकको सामुन्ने सदैव आज्ञाकारी हुनुपर्दछ। उसले आफ्नो जीवन आफ्नो मालिकमा समर्पण गर्नुपर्दछ।
१८) १ पिटर ३:१ र ३:५ मा भनिएको छ- महिलाले आफ्नो पतिको सामुन्ने पूर्ण रुपमा समर्पित हुनुपर्दछ।
१९) १-पिटर ३:३, १ टिमती २:९ मा भनिएको छ- महिलाले आफ्नो बाल काट्नु हुँदैन र शरिरमा कुनै पनि आकर्षक गरगहना र वस्त्र लगाउनु हुँदैन। शरिरमा कुनै पनि मेकअप वर्जित छ।
२०) १ टिमती २:१२ मा भनिएको छ- महिलाले आफूलाई पुरुषसंग समर्पित र शान्त (चुप) राखेको उत्तम मानिन्छ। र, महिलालाई कहिल्ल्यै पनि कुनै पनि खालको शिक्षा दिनु हुँदैन। साथै कुनै पनि प्रकारको पुरुषमाथी महिलाको अधिकार वर्जित गरिएको छ। महिलाहरु शान्त बसेकै राम्रो।
२१) १ करेंथीयंस ११:४-७ मा भनिएको छ- कुनै पनि पुजास्थलमा महिलाले आफ्नो शिर ढाकेर राख्नुपर्दछ।
अब स्वस्थानीका पाना च्यात्ने घूर्की दिनेहरुलाई सोध्नुहोस, हिन्दु धर्म र ग्रन्थहरु झुर, विभेदकारी, ब्यभिचारी, दास, अन्धविश्वासी, रुढ भन्दै आएकाहरुलाई सोध्नुहोस कि बाइबलले के महिलालाई स्वतन्त्रता दिएको रहेछ? महिलाको इज्जत गरेको रहेछ? महिलाको सम्मान गरेको रहेछ? महिलालाई दासबाट मुक्त गरेको रहेछ? रुढिवादमुक्त रहेछ? विभेदमुक्त रहेछ? अन्धविश्वासमुक्त रहेछ? या के रहेछ त?
धन्न हिन्दु धर्मले कसैलाई हत्या गरेर फालिदिनुपर्छ, कसैको अस्तित्व नै नामेट पारिदिनुपर्छ, सार्वजनिक बेईज्जती गरिदिनुपर्छ भनेको छैन। हिन्दुधर्ममा पनि हत्या, सार्वजनिक बेईज्जती र सफायाका कुरा हुँदाहुन त आज अझ कति कुर्लिंदाहुन हिन्दुधर्ममाथी नै गद्दार गर्ने कथित हिन्दुहरु?
अर्काको धर्म, ईश्वर र अस्तित्वको इज्जत नै गर्न नसकेको बाइबलले बाइबलका अनुयायीहरुले अरुको अस्तित्व स्विकार्छन त? शहरमात्र होईन, मान्छेमात्र होईन, यानकी जनावरसमेतको कत्लेआम गरिदिनुपर्छ भनेर बाइबलमा भनिरहंदा हिन्दुधर्मले के अरु धर्म, आस्था, ईश्वर र अस्तित्वलाई नकारेको छ? हिन्दु धर्मका ग्रन्थ बेद, पुराण, गिता, महाभारत, रामायण आदिमा के कसैको अस्तित्व नै स्विकार नगर्नु भनेर लेखेको पाऊनुभएको छ? पाऊनुभएको छैन भने फेरि हिन्दु धर्मकै खोईरो किन?
माफ गर्नुहोला, यहाँ मैले कुनै पनि धर्मको समर्थन र विरोध गर्नको लागि लेखेको होईन। हिन्दु धर्मका कुरितिहरुको बारेमा बहस भैरहंदा यसो बाईबलमा पनि केकस्ता व्यवस्था रहेछन र भनेर खोजिनिधीमात्र गरेको हुँ। मैले मेरो धर्म जस्तो छ, समयानुकुल परिमार्जन गर्दै अवलम्वन गर्छु। साथै अन्य धर्म, ईश्वर, अस्तित्व र आस्थाको पनि उत्तिकै सम्मान र आदर गर्छु, तिनि धर्मावलम्बीले मनाऊने चाडपर्व एवं संस्कार र संस्कृतिलाई पनि उत्तिकै माया गर्छु जति मैले मेरो धर्मसंग जोडिएका संस्कार, चाडपर्व र संस्कृतिलाई गर्दछु। मैले कसैको आस्थामा ठेस पुराऊन चाहन्न। किनकी धर्तीमा हामी मानव भएर जन्मिईसकेपछि जस्तो आफ्नो अस्तित्वको महसुस हुन्छ, त्यस्तै अर्काको अस्तित्वको पनि स्विकार गर्न सक्नुपर्दछ। मैले सबैको धर्म, आस्था, अस्तित्व र ईश्वरको स्विकारमात्र होईन, आदर र सम्मान गर्दछु। तपाईंले नि?
२०७५ चैत्र २६, मंगलवार ०४:३५ गते
केजरीवाल करिष्मा भाग-३
२०७६ माघ २८, मंगलवार ०९:५१ गते